Ilaalinta Xogta | Simrani
Naeema Brink product
Ilaalinta Xogta & MacluumaadKa Macaamiisha
Ilaalinta xogta si muuqata
Macluumaadka soo socdaa waxay bixinayaan dulmar guud oo ah waxa ku dhacaya macluumaadkaaga shakhsiga ah markaad booqato degelkan websaydhka ah. Xogta shaqsiyeed waa dhamaan xogta aad shaqsi ahaan lagu aqoonsan karo. Waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan mowduuca ilaalinta macluumaadka qormadeenna ilaalinta macluumaadka ee hoose ee qoraalkan.
Xog ururinta websaydhkan
Ayaa mas’uul ka ah xog aruurinta websaydhkan?
Ka baaraandegista xogta websaydhkan waxaa sameeya hawl wadeenka shabakadda. Waxaad ka heli kartaa faahfaahinta xiriirka ay ku leedahay sumadda boggaan.
Sideen u ururinaa macluumaadkaaga?
Dhinac, xogtaada waxaa aruurinaya adiga oo nala soo xiriiraya. Tani waxay noqon kartaa, waayo. Tusaale ahaan, waa xogta aad geliso foomka xiriirka.
Macluumaadka kale si otomaatig ah ayaa looga soo aruuriyaa nidaamkeenna IT-ga ama oggolaanshahaaga markii aad booqatid degelka. Kani waa xog farsamo (tusaale ahaan biraawsarka internetka, nidaamka hawlgalka ama waqtiga booqashada bogga). Xogtan ayaa si otomaatig ah loo duubay isla marka aad soo gasho websaydhkan.
Maxaan u isticmaalnaa xogtaada?
Qeyb ka mid ah macluumaadka ayaa la soo aruuriyay si loo hubiyo in websaydhka si sax ah loo bixiyo. Xogta kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu falanqeeyo dabeecadaha isticmaalehaaga.
Waa maxay xuquuqaha aad ka leedahay quseeya xogtaada?
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho macluumaadka ku saabsan asalka, qaataha iyo ujeedada macluumaadkaaga shakhsiyadeed ee bilaashka ah wakhti kasta. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad codsato in macluumaadkan la saxo ama la tirtiro. Haddii aad siisay ogolaanshahaaga xog-ururinta, waad ka noqon kartaa oggolaanshahan wakhti kasta oo mustaqbalka ah. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad codsato in ka shaqeynta macluumaadkaaga shakhsiyadeed la xaddido duruufo gaar ah. Waxaad kaloo xaq u leedahay inaad u xerayso cabasho masuulka kormeerka masuulka ah.
Waad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta cinwaanka ku qoran sumadda haddii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan ilaalinta macluumaadka.
Qalabka falanqaynta iyo aaladda saddexaad
Markaad booqato websaydhkan, dabeecaddaada saqafka leh waxaa lagu qiimeyn karaa tiro ahaan. Tan waxaa markii hore lagu sameeyaa cookies iyo barnaamijyada loogu yeero barnaamijyada falanqaynta.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan barnaamijyada falanqaynta waxaa laga heli karaa caddeynta ilaalinta soo socota.
Shabakadda Marti-gelinta iyo Xallinta Macluumaadka (CDN)
Marti gelinta dibedda
Websaydhkan waxaa qabta adeeg bixiye dibadeed (hoster). Xogta shaqsiyadeed ee laga soo aruuriyey websaydhkan waxaa lagu kaydiyaa adeegayaasha hoster. Tani waxay v noqon kartaa. a. waa cinwaannada IP, codsiyada xiriirka, meta iyo macluumaadka isgaarsiinta, macluumaadka qandaraasyada, faahfaahinta xiriirka, magacyada, marin u helka websaydhka iyo xogta kale ee laga soo saaray degelka.
Marti sooraha waxaa loo adeegsadaa ujeedada lagu dhammaystirayo heshiiska macaamiisheenna iman kara iyo kuwa jiraba (Art. 6 Para. 1 lit.) 1 lit.f GDPR).
Hoster-keena ayaa kaliya ka baaraandegi doona xogtaada illaa inta lagama maarmaanka u ah fulinta waajibaadka waxqabadka iyo raacitaanka tilmaamahayaga la xiriira xogtan.
Gunaanad qandaraas ah oo ku saabsan nidaaminta nidaamka
Si aan u dammaanad qaadno ilaalinta xogta u hoggaansan, waxaan dhammeystiray heshiis amarro ku aaddan la socodsiinta martigeliyahayaga.
Macluumaadka guud iyo macluumaadka qasabka ah
Hawlwadeennada bogaggan waxay si taxaddar leh u dhowraan macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waxaan ula dhaqmaynaa macluumaadkaaga qaaska si qarsoodi ah oo waafaqsan qaanuunka ilaalinta sharciga ee qaanuunkan iyo bayaanka ilaalinta xogta.
Markaad isticmaaleyso degelkan, xog uruurin kala duwan ayaa la soo aruuriyaa. Xogta shaqsiyeed waa xog aad shaqsi ahaan lagu aqoonsan karo. Bayaanka ilaalinta xogtan wuxuu sharxayaa macluumaadka aan aruurino iyo waxa aan u isticmaalno. Waxa kale oo ay sharraxaysaa sida iyo ujeeddadan loo sameeyo.
Waxaan jeclaan lahayn inaan tilmaano in gudbinta xogta internetka (tusaale ahaan markii email laguula xiriiri lahaa) ay yeelan karto kala duwanaansho amniga. Suurtagal ma aha in gebi ahaanba laga ilaaliyo macluumaadka marinka saddexaad.
Warbixin ku saabsan hay’adda masuulka ka ah
Hay’ada mas’uulka ka ah ka baaraandegida shabakadan waa:
Cawil Mustafa Ibrahim
Charlottenburger Strasse 81 22045 Hamburg
Hay’adda masuulka ka ah waa qofka dabiiciga ah ama sharciga ah ee, kaligiis ama la mid ah dadka kale, go’aamiya ujeedooyinka iyo habka loo adeegsado xogta shaqsiyeed (tusaale ahaan, magacyada, cinwaannada emaylka, iwm.).
Noqoshada ogolaanshahaaga ku aadan habeynta macluumaadka
Hawlgallo badan oo xog-ururinta ah si
WAKHTI KASTA DIYAAR AYAANU KUU NAHAY
+49 (0) 15211724047
+49 (0) 4033441888
Halkan Nagala soo Xidhiidh
Shuruudaha guud ee Adeegga
Lacag bixinta & Alaab dirista
Xuquuqda Alaab soo celinta
‭+49 152 11724047‬
Isniinta -Jimcaha: 11:00am- 08:00 pm
Sabtida : 11:00am – 7:00 pm
© 2020 Simrani
Magaca ama E-maylka *
Erayga sirta *
Ma ilowday erayga sirta?